कर्णालीका रैथाने बालीः आधुनिकता संगै संकटमा – Enayanepal.com
२०७८, १४ मंसिर मंगलवार मा प्रकाशित
सुर्खेत । कृषि क्षेत्रमा कर्णालीको आफ्नै विशेषता र पहिचान छ । उच्च हिमाली, पहाडी र भित्री मधेश भौगोलिक वनावट रहेको कर्णालीमा ठाउँ अनुसार थुप्रै प्रजातिका रैथाने खेती गरिन्छ ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा फल्ने मार्सी धान, फापर, कोदो, चिनो चामललाई कर्णालीको ब्राण्ड समेत भन्ने गरिन्छ । यी बालीको चर्चा कर्णालीमा मात्रै नभएर समग्र देशभर नै छ । भौगोलिक वनावटका कारण खेतीयोग्य जमिन कम रहेको कर्णालीमा थुप्रै प्रकारका रैथाने खेती गरिने भए पनि पछिल्लो समय ती रैथाने बालीहरु संकटमा छन् ।
आधुनिकता संगै प्रदेशका सबैजसो क्षेत्रमा उत्पादन हुने बस्तुहरु निश्चित क्षेत्रमा सिमित हुने, लोप हुने अवस्थामा छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण पनि यहाँको रैथाने बाली दिन प्रतिदिन विनाश हुँदै आएको छ । धेरै मेहेनत गरे पनि न्यून मात्रामा उत्पादन हुने, आफैले उत्पादन गरेको बस्तुबाट ६ महिना सम्म पनि खान नपुग्ने भए पछि कर्णालीबासीहरु रोजगारीको लागि भारत तथा अन्य क्षेत्रहरु जाने गरेका छन् ।
एका तिर रैथाने बालीहरु संकटमा परीरहेको अवस्थामा अर्को तिर प्रदेश बाहिरबाट आयातित बस्तुका कारण हाम्रो शिरीरलाई नकारात्मक असर परीरहेको कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन् । ‘पहिला मानिस खानका लागि कृषि गथ्ये तर आज भोली खानका लागि नभएर पैसाका लागि कृषि खेती गरीएको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘जस कारण मानिसको स्वास्थ्यलाई कुनै ख्याल नगरेर चरम विसादी प्रयोग गरेर उत्पादन गरीएका बस्तुका कारण हाम्रो शरिरमा गम्भिर खालका असर परीरहेको छ ।’
कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको खाद्यका लागि कृषि अभियानमा संग्लग्न रहेका डा. पौडेलले अभियानले कर्णालीका अर्गानिक उत्पादनको संरक्षण र सम्ब्रधनमा लागेको बताए । ‘हाम्रो उद्देश्य यहाँका अर्गानिक बस्तुहरुलाई नीतिगत क्षेत्रमा पुर्याउन बसह गर्ने, रैथाने खानालाई प्रवद्र्धन गर्ने हो । आधुनिकता संगै अघि बढेका विकृतिहरुको अन्त्य गरेर कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउनु हाम्रो उद्देश्य हो ।’ उनले भने ।
हाम्रो नेपालमा ८२ प्रतिशत भन्दा बढि मानिसह खानाका लागि कृषि खेती गर्ने गरेका छन् । कर्णालीको इतिहाँस हर्ने हो भने कुनै समय कर्णाली प्रदेश आफैमा आत्म निर्भर थियो । यहाँ उत्पादन हुने बस्तुहरु चिनको तिब्बत,भारत तथा नेपालकै अन्य विभिन्न क्षेत्रहरुमा निर्यात गरिन्थ्यो । तर त्यो अब एक इतिहाँसमा मात्रै सिमित देखिएको छ ।
पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन नहुँदा, कृषिमा लाग्नुपर्ने युवाहरु विदेश तिर केन्द्रीत हुँदा कर्णालीका रैथाने बालीहरु दिन प्रतिदिन लोप हुँदै गएको अभियानका संयोजक धनबहादुर गौतमले बताए । साविक कर्णालीका पाँच जिल्ला, सुदुरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा, बझाङ लगायतका जिल्ला हुँदै बिस्तार भएको अभियान देशैभरी बिस्तार गरेर खेती संरक्षणमा लागिरहेको उनले बताए ।